Amagqwetha eKhontrakthi yaMazwe ngaMazwe eNetherlands - Law & More
Wonke usomashishini okanye umntu wabucala uphantsi komthetho wesivumelwano nokuba kube kanye. Iingxabano ezinxulumene nokutolikwa kwesivumelwano, umbuzo ukuba zonke izibophelelo ezibekiweyo kwisivumelwano zizalisekiswe ngokufanelekileyo, kwaye iziphumo zokuzalisekiswa okungalunganga zi-odolo losuku.
NGABA UFUNA UNOBUCHULE NGOKUGQIBELA ISIVUMELWANO?
Ngaba ufuna uncedo ekuyileni ikhontrakthi? Ngaba izivumelwano ezenziweyo azibonwa kwaye ufuna ukuphelisa isivumelwano? Okanye ngaba unayo impikiswano eye yavela esiphelweni sesivumelwano? Siya konwaba kwinkonzo.
Imizekelo yezihloko esingathanda ukukunceda ngayo:
Ukuyila nokuvavanya izivumelwano;
Ukuyilwa kwesaziso esibhaliweyo sokungaphumeleli kwimeko yokungasebenzi kwekhontrakthi;
• ukusombulula iimbambano ezivela kwisiphelo sesivumelwano;
Ukuxoxa malunga nomxholo weemvumelwano.